Nbudata Lockheed Martin C-130J-30 maka FSX - Rikoooo
downloads 29 426
The C-130J bụ Kacha ọhụrụ version nke Hercules na nanị nlereanya ka na mmepụta. Externally yiri kpochapụwo Hercules na n'ozuzu, ndị J nlereanya bụ a dị nnọọ iche ugbo elu. Ndịrịta iche ndị a na-agụnye ọhụrụ apụta-Royce æ 2100 D3 turboprops na Dowty R391 ọtụtụ ihe mejupụtara scimitar propellers, digital avionics (gụnyere Head-Up Ngosipụta (HUDs) maka nke ọ bụla pilot) na-ebelata akwọ ụgbọ chọrọ, abụọ ụgbọelu, otu ibu-nwe, na otu ndi oru ugbo isi. The C-130J ijiji ọsọsọ, elu karịa na n'ihu karịa niile gara aga C-130 ụdị.
Ihe ngwugwu zuru ezu maka FSX/ SP2 (eserese DX9), 2D na ogwe aka VC nwere HUD, & Garmin avionics. Da omenala, akụkụ ahụrụ n'anya zuru oke, ezigbo ụgbọ elu ụgbọ elu. Ndụ anọ gụnyere - USAF, USCG, RAF na US Marines Blue Angels na-akwado ụgbọ elu. Site n’aka Jean-Pierre Brisard na Bob May - Ihe nlere maka ụgbọ elu Premier.